चीनविरोधी प्रचार र हाम्रो रणनीति | Bipin Adhikari
चीनविरोधी प्रचार र हाम्रो रणनीति
वि.सं. २०७२ चैत ५ गते शुक्रबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत ७ गते हुने चीनको औपचारिक भ्रमण सम्बन्धमा राज्यको तयारी सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । भारतीय नाकाबन्दी खप्दाताका नेपाल–चीन बीचका प्रमुख व्यवसायिक नाका वा सडकहरुको तत्काल स्तरोन्नति र विस्तार, इन्धन आपूर्तिका लागि भोट–नेपाल पाइपलाइन, दीर्घकालीन इन्धन आवश्यकता पूर्तिका लागि दुईवटा जलविद्युत स्टोरेज प्रोजेक्ट तथा वैकल्पिक उर्जामा चिनीया लगानीलाई विकल्पका रुपमा अघि सार्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक बहसको विषय भएको थियो । सरकार पक्षबाट यी प्रस्तावहरु चिनीया नेतृत्व समक्ष पु¥याइएको पनि सर्वविदित तथ्य नै हो ।
भनिन्छ प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि, इन्धन आपूर्ति, टे«ड मार्क र पेट्रोलियम अन्वेषण सम्बन्धी सम्झौताहरु हुने निश्चित गरिँदैछ । तर यी सम्झौताहरुले नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा तत्कालै ल्याउने परिवर्तन अहिले स्पष्ट छैन । एकातिर सरकारका घटकहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सन्दर्भमा बांगोटिंगो कुरा गर्न सुरु गरेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई बिदा गर्दछौं भन्ने अभिव्यक्ति दिई सरकारको हैसियत फरक परेको देखाउन लागेको छ । नेपालको दीर्घकालीन हितमा कामकारबाही हुन लाग्दा यस्तो हुँदै आएको इतिहास पनि छ । तर परिस्थितिलाई हेर्दा के निश्चित छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको भ्रमणलाई नेपालका हितमा फलदायी बनाउन सक्नु भएन भने सम्भवतः चीनसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको अहिलेको एजेण्डा लामो समयका लागि थन्किने छ । चीनसँगको सहकार्यका बारेमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा रहेको स्पष्टताका आधारमा चिनीयाहरुको स्पष्टता जाहेर हुने हो । यस सम्बन्धमा यहाँ केही चर्चा आवश्यक छ ।
जसरी नेपाल–भारत सम्बन्धको फरक परिप्रेक्ष्य छ, त्यसैगरी नेपाल–चीन सम्बन्धको पनि परिप्रेक्ष्य फरक छ । दुवै देश बीचको सम्बन्धका आआफ्ना आधार तथा आयामहरु हुन सक्दछन् । तर नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा नेपालमा राम्रो गृहकार्य भएको देखिँदैन । निसन्देह भारतझैं चीन पनि नेपालमा आफ्नो राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा कार्यरत होला । यो त चीनको आफ्नो कुरा भयो । नेपालको कुरा के हो ? त्यो यहाँ सान्दर्भिक छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा नेपाल–चीन सम्बन्धी संसूचना व्यापक रुपमा गलत प्रचारप्रसारको शिकार भएको छ । जस्तो चीन नेपालभन्दा धेरै टाढा छ । भौगोलिक कारणले आइजाइ गर्न वा बन्दव्यापार गर्न सम्भव छैन । हिमाल र डाँडाकाँडा छिचोल्ने राम्रो बाटोघाटो बनाउन सकिँदैन । त्यसमा पनि चीन नेपाल बीचको दुईपक्षीय व्यापारको परिमाण एकदमै सानो भएकाले चीनले नेपाललाई भन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी महत्व दिन्छ । भारत रिसाउने गरी चीनले काम नै गर्दैन । यसै पनि नेपालको छिमेकी चीनको स्वशासित प्रदेश रहेको भोटकै विकास हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको विकासमा चीन कसरी सहयोगी बन्न सक्ला ? कतिपयले चिनीया छट्ट् हुन्छन्, व्यापारी स्वभावका हुन्छन् । कौडी बाहेकका कुरामा उनीहरुलाई खासै चासो हुँदैन पनि भन्दछन् । भाषा मिल्दैन, धर्म–संस्कृति मिल्दैन । त्यसैले चीनको पूmर्ति लगाउनुको कुनै अर्थ छैन पनि भन्ने गरिन्छ । निस्सन्देह, यी सबै झुट्टो र प्रायोजित कुराहरु हुन् ।
नेपाल र चीन (भोट) बीचको सम्बन्धलाई नेपाली आवश्यकताका आधारमा संवेदनशील भई बढाउन नसकेको भने यथार्थ हो । किन यस्तो भयो त ? किनकी कतिपयलाई लाग्दछ चीन असल छिमेकी हुँदो हो भने नाकाबन्दीको बेला जुनसुकै किसिमको सहयोग पनि गर्न सक्दथ्यो । चिनीया क्षमताले दिने भएको भए रातारात बाटोघाटो बन्दथे । भुइँचालो खप्दा पनि चिनीया हवाइजहाजहरुले नेपालको आपतकालीन आपूर्तिको आवश्यकता पूरा गर्दिन्थे । सम्पूर्ण नेपालीले ग्यास र बिजुली अभावमा बाँचेको बेला चीनले तत्काल विकल्पको बाटो दिने थियो । कम्तिमा पनि दुईवटा सम्म जलविद्युत स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउने प्रक्रिया मात्र पनि अगाडि बढेको भए चीनको सदासयता बुझ्न सकिन्थ्यो होला । यस्ता छोटा कुराहरुको प्रचारप्रसारमा देखिएको नियत बुझ्नेले राम्रैसँग बुझ्दछन् । यी भनाईमा दम छैनन् । यी भनाईहरुको जालोमा नेपाल संसारको सबैभन्दा ठूलो मध्येको चिनीया अर्थव्यवस्थासँग नजिकिन सकेको छैन ।
नेपाल चीनको १६ वटा सँगै टाँसिएका मुलुकमध्ये एक हो । चीन आफ्ना छिमेकीहरुसँग कसरी रहे बसेको छ ? उसको सोचाई र काम गराई कस्तो छ ? भन्ने बुझ्न नेपाल–चीन सम्बन्ध मात्र हेरेर पुग्दैन । यसलाई व्यापक परिवेशमा हेर्नु पर्दछ । चीन तीब्र गतिमा विकास भइरहेको एउटा शक्तिशाली मुलुक भएको कुरामा आजको विश्वमा कुनै द्विविधा छैन । प्रजातान्त्रिक संरचनाको प्रयोगको विषयलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने विज्ञान, प्रविधि, अर्थव्यवस्था, उत्पादन, वितरण, विश्वव्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इत्यादि कुनै पनि क्षेत्रमा चीनले युरोप र अमेरिकालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्दछ । अन्यलाई गन्दैन । तर पनि चिनीयाहरु मुलुकहरु बीचको समानता, सहअस्तित्व अनि पारस्परिक विकासको कुरा गर्दछन् । उनीहरुमा साम्राज्यवादको आकांक्षा देखिँदैन ।
विदेश नीतिमा कमजोर मुलुकको अज्ञानता वा भिरुताबाट आफ्नो थैलो भर्ने संस्कारलाई चिनीयाहरु निचो मान्दछन् । अर्काको आन्तरिक कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने रणनीति हुँदैन । माया, स्नेह, भातृत्व र साझापनको खोजी चिनीया कुटनीतिमा व्याप्त हुन्छ । चिनीयाहरु वैदेशिक सम्बन्ध दुवै पक्षलाई फाइदा हुने विषयहरुमा केन्द्रित गर्न चाहन्छन् । यसबाट मात्र दिगो सम्बन्धको विकास हुन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाई हो । चिनीयाहरु लडाइँ गर्न चाहँदैनन् । खोसेर, झम्टेर हिँड्ने, लुटेर खाने र घाँटी थिचेर घुँडा टेकाउने प्रवृत्ति हुँदैन । यी सबै बानीव्यहोरा चिनीया प्रवृत्तिमा संस्थागत हुनु पछाडिका ऐतिहासिक कारणहरु छन् । यी कारणहरुलाई बुझेर चीनसँग सहकार्य गर्नेले उनीहरुसँगको सम्बन्धबाट प्रशस्त लाभान्वित हुन सक्दछ ।
चीन एउटा प्राचीनतम् तथा अरुले राम्रो बुझ्न नसकेको मुलुक हो । हेनरी किसिन्जर, एभान ओसनोज, जाँन ब्रायन, ओर्भिल स्केल वा जाँन डेलरी जस्ता लेखकहरुले आजको दिनमा चीनलाई बुझ्न केही सजिलो बनाइदिएका छन् । अधिकांश चिनीयाहरु ऐतिहासिक रुपमा आपूmलाई सबै मुलुक वा जाति भन्दा सभ्य र सुसंस्कृत्य मान्दछन् । संसारमा सभ्यतालाई चिनाउने वा विकासको प्रक्रियालाई वर्णन गर्ने अधिकांश आविष्कार वा प्रगतिहरु चीनबाटै भएको उनीहरुको दाबी छ । उनीहरु भाषा, धर्म, संस्कृति, विज्ञान तथा आर्थिक रुपमा पनि चीन सबैभन्दा अगाडि थियो भन्ने ठान्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पूँजीको निर्माणमा प्राचीन चीनको ‘सिल्क रोड’ को अवधारणा चीनको ऐतिहासिक क्षमताको उदाहरणका रुपमा अघि सारिन्छ ।
आजको क्षमता तथा ऐश्वर्यवान चीनको उदय हुनु भन्दा अघिको करिब डेढ–दुई सय वर्ष चिनीयाहरुले अभूतपुर्व रुपमा दुख पाए । उनीहरुको मुलुकको सभ्यता ओरालो लाग्न थाल्यो । अर्थव्यवस्था कमजोर हुँदै जाँदा विदेशीसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्न गए । शासकीय क्षमता ह्रासोन्मुख हुन थाल्यो । आफ्ना साना छिमेकीहरु पनि शोषणउन्मुख हुन पुगे । लामो गृहयुद्धबाट उनीहरुले देशलाई बचाउन सकेनन् । यस्ता कारणले राज्य दमनकारी हुँदै गयो । योसँगसँगै साम्यवादी क्रान्तिमा देश प्रवेश ग¥यो । यी सबै दुर्दशाहरुका कारण चीनको आत्मसम्मानमा ठूलो ठेस पुगेको विश्लेषकहरुको मान्यता छ ।
हुन पनि आधुनिक चिनीयाहरुले १८३९ देखि १८४२ सम्म भएको पहिलो अफिम युद्ध वा १८९४ देखि १८९५ र १९३७ देखि १९४५ मा भएको चीन–जापान युद्धलाई पीडाका साथ सम्झिन्छन् । बेलायतीहरुले गरेको शोषण र आफूभन्दा धेरै सानो देश जापानको हातबाट हार्नु परेको आत्मग्लानीले चिनीयाहरुलाई क्षतविक्षत गरेको देखिन्छ । विश्वयुद्धहरुले पनि चिनीयालाई भूमण्डलीय रुपमा पीडित बनायो । शीत युद्धका बेला उनीहरु धेरैका शत्रु मानिए । साम्राज्यवादीहरुबाट उनीहरु यति अपमानित भए कि हरेक चिनीयालाई लाग्दछ यसको प्रतिशोधमा लडाईं गर्नु हुँदैन तर संसारबाट त्यो अपमानको क्षतिपूर्ति लिनु पर्दछ । क्षमता र योग्यता विकास गरी चीनलाई पुनर्जागृत गर्नु पर्दछ । आक्रमण नगरिकन शत्रुलाई जित्नु पर्दछ । चिनीयाहरुलाई लाग्दछ उनीहरुले खपेको अपमान एउटा राजनीतिक पूँजी हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । अपमानलाई सम्झाएर यसमार्फत चिनीयाहरु माझ शक्तिको सिर्जना गरिनु पर्दछ भन्ने चिनीयाहरुको सोचाई छ ।
चिनीया सोचाईमा अतिरञ्जना पनि होला । तर के बुझ्नु पर्दछ भने आफ्नो मुलुक, यसको प्राचीन गौरव र सभ्यता उपरको आक्रमण र दमनबाट भएको पीडालाई आमचिनीयामाझ संस्मरण गराइराख्न उनीहरुले राष्ट्रिय अपमान दिवस मनाउन थाल्न पनि अप्ठ्यारो मानेनन् । आज पनि साना चिनीया नानीहरुलाई इतिहासमा खपेको राष्ट्रिय अपमान नबिर्सन तथा आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउन सिकाइन्छ । यसका लागि आपूm सर्वोत्कृष्ट हुनु पर्दछ भन्ने सिकाइन्छ । मुलुकको सैनिक प्रविधि तथा तरिकाहरु पश्चिमी मुलुकहरु भन्दा बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने भावना देखिन्छ । उनीहरु जुनसुकै अवस्थामा पनि उपयोगितावादी दृष्टिकोण राख्दछन् । जेसुकै गरेर भए पनि काम गर्न सकिने सुत्रको खोजी गर्नु उनीहरुको राष्ट्रिय संस्कृति भइसकेको छ ।
चिनीयाहरुको क्रान्तिको आधार फ्रान्सेली क्रान्तिको जस्तो स्वतन्त्रता र मानव अधिकार होइन । बेलायतको गौरवपूर्ण क्रान्तिले उनीहरुलाई आकर्षित गर्दैन । फ्रान्सको चर्चित बास्टिल गढीको हमलामा पनि चासो राख्दैनन् । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र पनि उनीहरुका लागि त्यति महत्वको लिखत होइन । जसरी भए पनि आफ्नो सभ्यतालाई क्षतविक्षत पारिदिने असभ्य वा जंगली विदेशीबाट बच्ने तथा पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो ‘जाई कटक’ नगर्ने केवल ‘झिटि कटक’ मात्र गर्ने चिनीयाहरुको नीति हुन्छ । उनीहरुको क्रान्तिको बल देशको सभ्यता र विरासत फर्काउने अठोट हो । यो प्रयासमा उनीहरुले आपूmले निरन्तर मान्दै आएको आफ्ना पूज्य गुरु वा दार्शनिक कन्फुसियसको बाटो पनि छोड्न तयार छन् । क्रान्तिकारी माओ त्से तुङ्गको आचारविचार पनि छोडेकै छन् । त्यहाँको जनता कुनै मौलिक अधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको प्रभावमा छैनन् । जसरी पनि देशलाई उँभो लगाउनु पर्छ र चीनलाई शक्तिशाली हैसियतमा फिर्ता गर्नु पर्दछ भन्ने उनीहरुको मूल मन्त्र छ ।
आजको चीनमा केही शब्दहरुको निरन्तर प्रयोग हुन्छ । यस्तै एउटा शब्द हो ‘फुकियाङ’ । अर्को शब्द हो ‘फुक्सिङ’ । पहिलोले चिनीयाहरुको ‘सम्पत्ति’ र ‘शक्ति’ प्राप्तिको निरन्तर खोजलाई व्यक्त गर्दछ । अर्कोले यस पुनित कार्यका लागि मुलुकको ‘पुनर्योवन प्राप्ति’ लाई जोड दिन्छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्यलाई बलियो बनाउ, सैन्यशक्तिलाई बेजोड पार भनिन्छ । लडाईं गर्दा धनजनको खति हुन्छ, मिलेर काम गर्दा दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ भन्ने चिनीया विश्वास नयाँ चीनमा विकसित हुँदै गएको सार्वजनिक चेतना हो ।
नेपालले चिनीयाहरुको आधारभूत चरित्र बुझेर चीनसँग वार्ता गर्नु पर्दछ । किन नेपालका बारेमा टिप्प्णी गर्दा नेपाल आफ्नो आन्तरिक मामिलाको समाधान गर्न आफैं योग्य छ, अन्य मुलुकले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, चीन नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दछ, दुईपक्षीय सम्बन्धको आधार पञ्चशीलको सिद्धान्त हो भन्ने आशयका भनाईहरु चीनबाट किन आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दछ । यसो भनेर चिनीयाहरुले नेपाललाई हौसला दिएको मात्र होइन । उसले आफ्नो आदर्शको वकालत गरेको पनि हो । यही आदर्शको वकालत गर्न हिमाल छिचोलेर ग्यास र तेल पठाएको हो । यो सम्भव छ भनेर देखाएको हो । तर प्रतिफल नदिने गरी गरिएको सहयोगको याचनाले नेपाली जातिलाई बद्नाम मात्र गर्दछ । भिक्षा माग्ने संस्कृति नेपाली जातिमा यसै पनि कहिले रहेन ।
नेपालको चाहना चिनीया लगानी हुनु पर्दछ । त्यसमा पनि राम्रो लगानी भनेको संयुक्त लगानी हो । उनीहरु नेपाललाई सहयोग हुने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हात हाल्न तयार छन् । विशेषगरी स्वाधीन तथा भुपरिवेष्ठित नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा उनीहरु नेपाललाई काम लाग्न सक्दछन् । जुनसुकै स्तरको र जतिसुकै अवधिको लगानीमा चिनीयाहरु चर्चित छन् । जब नेपाल सरकारले भिक्षा माग्नुको साटो हामी दुईपक्षीय लगानी गरौं वा साझा हितका लागि कार्य गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दछ, चिनीयाहरुले त्यो मन पराउने छन् । चीनमा जति विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, त्यसबाट युरोप, एसिया वा ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरु बनाउन सकिन्छ । चिनीया क्षमताका अगाडि नेपालको आर्थिक रुपान्तरण कुनै ठूलो विषय नै होइन । संयुक्त लगानीमै पनि चिनीयाहरु नेपाललाई चाहिने जति ऋण दिन तयार देखिन्छन् । चीनसँग ती सबै क्षमताहरु छन्, जो युरोप, अमेरिकासँग छ ।
चिनीयालाई थाहा छ, उनीहरुको थैलो बलियो छ र नेपालमा लगानी वा मुनाफाको प्रशस्त अवसर छ । ल्याटिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रिकादेखि पूर्वी युरोप तथा एसियाका लगभग हरेक मुलुकमा लगानी गर्दैै अघि बढेको चीनलाई नेपालमा चाहिँ कुनै आकांक्षा छैन भनेर नेपालको भलो नचाहनेले मात्र भन्न सक्दछन् । यसो हुँदो हो त चिनीयाहरुले विश्व बैंक र एडीबी सरह काम गर्ने गरी एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेण्ट बैंक स्थापना गर्ने चीन तथा यसका छिमेकी मुलुकहरु समेतका लागि व्यापार तथा वित्तीय विकासका लागि सिल्क रोडको पुरानो अवधारणालाई ब्युँताउने परियोजना, नीतिगत समन्वय, संयोजनता, अविछिन्न व्यापार, वित्तीय समन्वय र जनस्तरको सम्बन्धको कुरा गर्ने थिएनन् ।
उनीहरुको आशंका अर्कोतर्फ छ भन्ने यो पंक्तिकारलाई लाग्दछ । उनीहरुलाई लाग्दो हो के नेपालको नेतृत्व देश बनाउनका लागि समर्पित छ ? के उनीहरु स्वतन्त्र र स्वाभिमानी निर्णय गर्न सक्दछन् । गरेको वाचा पूरा गर्न सक्ने औकात नेपाली नेतृत्वमा छ र ? अर्को कुरा उनीहरु नेपालले आफ्नो प्रस्ताव प्रशस्त गृहकार्य गरेर ल्याओस् भन्ने ठान्दा हुन् । चकित बनाउने गरी खल्तीबाट प्रस्ताव झिक्ने र घर फर्केपछि सँधैका लागि बिर्सने नेपाली बानीले उनीहरुलाई असमञ्जस्यमा पारेको हुन सक्छ । चिनीयाहरु परिपक्व व्यवहार खोज्दछन् । एक पटक गरेको निर्णय पटक–पटक सम्झाइरहनु नपरोस् भन्ने उनीहरुको सोचाई हो ।
प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणमा उनले भारतका नेता वा प्रतिपक्षसँग औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा के के बोलेका थिए वा थिएनन् वा अर्को शब्दमा भन्दा देशका लागि घोषणा गरिएको नीति आन्तरिक रुपमा समर्थित थियो वा थिएन भन्ने कुरालाई चीनले नजिकबाट अध्ययन गरेको होला । उनीहरु व्यवहार हेर्दछन्, बोलीबाटै मात्र प्रभावित हुँदैनन् । आफूले गरेको सहयोग नेपालले धान्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने बारेमा उनीहरु सशंकित देखिन्छन् । यहाँको नेतृत्व वर्गको चरित्र हेर्दा नेपालमा उनीहरुले गर्ने सहयोगको जोखिम नेपालीले भोग्नु नपरोस्, साथसाथै नेपाली जनताले उनीहरुले गरेको सहयोगका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकार खप्नु नपरोस् भन्ने बारेमा चिनीया चनाखो छन् । के नेपालले यस बारेमा चिनीया विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेको छ ? प्रधानमन्त्रीले यी विषयमा चिनीया नेतृत्वलाई आश्वस्त गर्न सक्नु पर्दछ ।